Wariyaasha Shabeelle & Sky oo maanta kasoo muuqanaya maxkamad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa lagu wadaa in maanta maxkamad lasoo taago Milkiilaha Radio Shabeelle iyo SKY FM, C/maalik Yuusuf Maxamuud iyo weriyaalka ka tirsan shabakadaas oo kala ah: Axmed Cabdi Xasan, Maxamuud Carab iyo Maxamed Badshiir Xaashi.
Waa markii saddexaad ee wariyaashaas la horgeynayo maxakamada gobolka Banaadir, iyadoo markii ugu dambeysay aheyd 5-tii Janaayo 2015, waxaana maalintaa maxkamadda ka maqnaaday qareenkii u doodayey wariyaasha, taasoo keentay in maxkamadda dib loo dhigo.
Maxamed Muuse oo ah ahaasimaha Radio Shabeelle, lana hadlay warbaahinta ayaa sheegay iney maanta sugayaan iney helaan xukun cadaalad ah.
Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa 21-kii bishii October 33 sanadkii 2014 damiin ku sii deysay Milkiilaha Idaacada Shabelle C/maalik Yuusuf Maxamed iyo Axmed Cabdi Xasan oo ahaa Kuxigeenka Madaxa Wararka Shabelle, iyadoo ay xabsiga ku jiraan Maxamed Bashiir Xsshi iyo Maxamuud Carab.
Xeer Ilaalinta Qaranka ayaa ku eedeysay milkiilaha Shabeelle arrimaha kala ah: Dhiirigelinta in weriyaashu galaan dambiyo, Kicin dadweyne, Khiyaano qatan iyo ka hortaga ciidamada amaanka.
Idaacadda Shabelle iyo SKY FM ayaa tan iyo 15-kii Ausgust 2014 ka maqan Hawad iyadoo ay weli xiran yihiin 2 wariye oo ka kala tirsa Shabakadaha Mataanaha ah ee Shebelle iyo SKY FM.
Labo weerar oo lagu qaaday dalka Denmark & khasaaraha ka dhashay